काठमाडाैं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको विरोधमा मुलुकभर प्रदर्शन भएको छ । जिम्मेवारपूर्वक अनुसन्धान नगरेको भन्दै थप पाँचजना प्रहरी निलम्बनमा परेका छन् । गृह मन्त्रालयले यसअघि नै सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा पाँचजना प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको जनाएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का डीएसपीसहित पाँच […]
रसुवा । रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका–२ टिमुरेमा निर्माणाधीन रसुवागढी जलबिद्युत आयोजनामा पहिरो जादाँ दुई जनाको मृत्यु भएको छ । नौ जना घाइते भएका छन् । आयोजनामा काम गर्नको लागी पहुँच मार्ग बनाएको स्थानको अडिट नं. २ मा गएराती आएको पहिरामा पुरिएर मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका–११ का २२ वर्षका रमेश कार्पाैला र रुकुमको भूमे गाँउपालिका वडा नं. २ […]
मुलुकभर न्यायका लागि विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं । १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ५२ दिन पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म निर्मलाको हत्या कसले गरेको हो भन्ने पुष्टि हुन नसक्दा घटना थप उग्र बन्दै गएको छ । निर्मलाको हत्यामा उच्चस्तरीय अनुसन्धान कमिटीले प्रहरीको लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेपछि र अभिभावकले पनि प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लगाएपछि घटनाले नयाँ रुप […]